Madagasikara : Manindrahindra loatra ny Tontolo iainana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2008 21:19 GMT
(sary nindramina tamin'i Harinjaka)
Tsy isalasalana fa ny resaka tontolo iainana manokana misy ao aminy, no ahafantaran'a an'i Madagasikara indrindra. Na dia izany aza, ny fanindrahindrana ny tontolo iaianana dia tsapan'ny Malagasy ho toy ny manarona izay fahasarotana amin'ny fiainana andavan'androny.
Rossy izay isan'ny mpanakanto Malagasy malaza indrindra no namorona ny hira “Resa-babakoto” izay ahitana ity andininy manaraka ity:
Ny gidro sy ny ala, Tsara karakara
Ny zanany tomany, tsisy mpanontany
(sary nindramina tamin'ny foko-madagascar)
Na dia heverina aza fa misy fanavesarana ara-kanto ny ambaran'i Rossy dia mifototra tokoa ny fanahian'ireo Malagasy izay manahy fa ny fiarovana ny tontolo iaianana dia anaovana fandaniana be lavitra raha oharina amin'izay atokana hoan'ny mponina manodidina ireny faritra ireny.
Iaraha-mahalala ny fivoizana ara-politika ataon'i Rossy ary noraràn'ny fanjakana tsy hotanterahina ny andiam-pampisehoana nokasainy hotanterahina tany Madagasikara (fr). Angamba tsy ny fomba fijeriny ara-pôlitika ara-tontolo iainana loatra no anton'izany fandraràna tampoka izany anefa tsara koa ny manamarika fa isan'ny tsindrian'ny governemanta ankehitriny ho isan'ireo fototra ijoroan'ny fampandrosoana maharitra ny fiarovana ny tontolo iainana.
Windows on the New World of Sipakv manapariaka kabary natolotry ny Filoha Ravalomanana amin'izay maha-sarobidy ny zava-boahary sady manindry izay nambarany:
The famous German author Goethe already knew about the lemurs. The “Lemuren” play an important role at the end of Faust II. Mephisto calls them when Faust is dying. So, it was our lemurs that buried your ‘Faust’.
“Na dia ny mpanoratra fanta-daza Alemana Goethe aza dia efa nahafantatra ny fisian'ireo Babakoto [Gidro]. Ireo “Lemuren” dia manana ny toerany manokana amin'ny fiafaran'ny tantara Faust II. Izy ireo no antsoin'i Mephisto rehefa nodimandry i Faust. Izany hoe nireo gidronay no nandevina ny ‘Faust’-nareo ”.
Raha somary very ianareo ka misalasala ny amin'ny fototr'izany fanambarana izany dia aza manahy fa tsy irery ianareo.
Ankoatry ny kabarin'ny filoham-pirenena dia lahatsoratra vaventy roa mikasika ny tontolo iainana no nisongadina tamin'ny blaogasyfera tamin'ny herinandro lasa :
Fandinihana midadasika momba ny fiarovana ny tontolo iainana no matoandahantsoratry ny gazety Science, izay gezty manan-daza hoan'ireo mpikarka. Nomarihiko tao amin'ny blaogiko Rakoto's Rants fa na dia Anjerimanontolo aty Amerika aza ny ankabeazan'ireo mpivoy izany lahatsoratra izany dia misy ny sampan-draharaha any Antananarivo izay niara-niasa taminy ary misy mpikaroka Malagasy izay nandray anajara betsaka tamin'izany fikarohana izany.
Ny fikambanana Tany Meva izay mpivoy ny fiarovana ny tontolo iainana any Madagasikara dia isan'ireo valo nandrombaka ny tolotry ny MacArthur Foundation “Creative and Effective Institutions” [fanampiana ara-bola]. Azavain'ny namana Jogany ao amin'ny blaoginy The Purple Corner ireo izay sahanin'ny fikambanana Tany Meva:
Mikatsaka izay hampitomboana ny fampiasana vahaolana maharitra izay manaja ny tontolo iaianana ny fikambanana Tany Meva, fampianarana sy famohazana ny fandraisan'andraikitr'ireo fiaraha-monina mba hiarovana ireo reniala izay tandidomin-doza. […]
Raisiny (izy ireo) ho adidy ny fivoizana ho amin'ny fitantanana mba :
– hanajariana ny fitantanana maharitra ny tontolo iaianana any Madagasikara
– fandraisana anjara amin'ireo tanjona iraisam-pirenena mikasika ny tontolo iaianana, amin'ny alalan'ireo fiaraha-monina manodidina [ireo reniala].
Farany, Tomavana no manontany tena ao amin'ny Malagasy Miray izay lohalaharan'ny fitondrana ankehitriny:
Raha mbola manambana ireo faritra maro ny kere sy ny tsy fahampian-tsakafo, toa tsy misy mampiraika ny fitohizan'ny lalao [fandravana ny FMF, fandraràna an'i Rossy, sns …] izay efa nanomboka fotoana ela ihany izay